थारुको मौलिक ‘छत्री’ लोप हुँदै, कसले जोगाउने परम्परागत प्रविधि ?
धनगढी – कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–८ जोनापुरकी पूजा चौधरीको परिवार वर्षात्भरि छत्रीकै छाँयामा रम्छ । साढे ३ सय घरधुरी रहेको जोनापुरमा ९५ प्रतिशत बढी आदिवासी थारु जातिकै बाहुल्यता छ ।
तर, जोनापुरमा पूजाको परिवारजस्तै केहीले मात्रै छत्रीको प्रयोग गर्छन् । बाँकीले आधुनिक छाताको प्रयोग गर्दै आएको बताइन्छ । जोनापुर वस्ती प्रतिनिधि थारु वस्ती मात्रै हो । पछिल्लो समय समग्र थारु समुदायबाटै छत्री लोप हुने क्रममा पुगेको छ ।
धानको बिउ उखेल्दै गरेकी पूजा भन्छिन्, ‘बाजेले बनाई दिएको छत्री प्रयोग गर्छौ । उहाँहरू रहुन्जेल त ठिकै छ । पछि थाहा छैन । उसो त आजभोलि बिरलै पाइन्छ, छत्री ।’
छत्री अर्थात् छाता आदिवासी हस्तकला तथा प्रविधिको उच्चतम् नमूना हो । जुन वर्षात्को समयमा पानी र घामबाट बच्न घरेलु साधन स्रोतबाट निर्माण गरिन्छ । निर्माण गर्नलाई सीप दक्षता उत्तिकै जरुरी रहन्छ । जुन सीप र प्रविधि पुस्तान्तरण नहुनुले पनि छत्रीको अस्तित्व संकटमा परेको बताउँछन् थारु कल्याण कल्याणकारिणी सभा कैलालीका निवर्तमान सभापति प्रभातकुमार चौधरी ।
‘बोक्न पनि असजिलो हुने हुँदा सबैको रोजाइमा आधुनिक छाता मात्रै पर्छन्, अर्कोकुरा नयाँ पिढीमा छत्री बनाउने ज्ञान र सीप पनि कहाँ छ र ?’ उनी अगाडि थप्छन्, ‘छत्रीको प्रयोगकर्ता घट्दै गए केही वर्षमै संग्राहलयमा मात्रै सीमित हुनेछ ।’
कैलारी गाउँपालिका–६ बेनौलीका स्थानीय बुद्धिजीवी भरथरी डगौराका अनुसार छत्री बाँस र नम्है्रन (एक प्रकारको वनस्पति) को पातको प्रयोगले निर्माण गरिन्छ । जसको लागि पातलो र लचकदार हुने गरी बाँसको चोइटोको व्यवस्था गरिन्छ ।
उक्त चोइटोलाई एकआपसमा बाँझिने गरी गोलाकार आकारको कभर बनाइन्छ । एउटा छत्री निर्माणको लागि २ वटा एउटै आकारको कभर चाहिन्छ । छत्रीको माथिल्लो भागमा राखिने कभरलाई ‘पेरी’ र तल तल राखिने कभर भागलाई ‘झेल्री’ भनिन्छ ।
कभर निर्माण गरिसकेपछि २ वटा कभरको बिच भागमा पानी र हावा नछिर्ने गरी नम्ह्रैनको पात बिछ्याएर पातलो रसीले बाँधिन्छ । यसरी बनाइएको छत्रीको बीच भागमा टाउकोमा अड्याउन सजिलो होस् भनी खोपिल्टो बनाइएको हुन्छ ।
यसरी बनाइएको छत्री टाउकोमा राखेर हलो जोत्नेलगायत अन्य काम गर्न सजिलो हुने थारु बुद्धिजीवी डगौंराको भनाई छ । १ पटक बनाइएको छत्री २÷३ वर्षसम्म प्रयोग गर्न सकिने बताइन्छ ।
असार २६, २०७५ मा प्रकाशित
लखन चौधरी लोकान्तरका लागि प्रदेश नम्बर ७ का प्रतिनिधि हुन् ।
बेच्न भनी एकैजग्गा १५ जनाबाट देखाएर ३३ लाख ठगी, अभियुक्त दम्पती पक्राउ
दाङमा मध्यराति दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु, २ घाइते
जन्ती आएका युवकको कुटपिटबाट मृत्यु, युवतीको निहुँ
चर्काे गर्मीमा राजधानीकै अस्पतालमा खानेपानीको हाहाकार
बसबाट खसेर बालकको मृत्यु
विश्वकप : 'रोहित-शिखर' विश्वकै सफल 'ओपनिङ जोडी', भारतले ट्रफी उचाल्ला ? एजेन्सी- ३० मेदेखि इंग्ल्याण्डको वेल्समा क्रिकेटको १२ संस्करणको महाकुम्भ अर्थात् विश्वकप हुँदैछ । भारतीय टीमले आफ्नो पहिलो खेल जुन ५ मा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध साउथेम्प्टनमा खेल्नेछ । यसअघि भा...
अत्यावश्यक कानून तत्काल निर्माण गर्न निर्देशनसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेश
ढुम्बातालमा हिमालको छायाँ